トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ macluumaad wax ku ool ah pachinko ururiyay iyadoo la isticmaalayo goobta Robo xogta Toddoba
Waxaa goobta pachinko in goobta Lobo xogta Toddoba. In si la mid ah sida P-WORLD goobta macluumaadka warshadaha, waxaad ka arki kartaa sida raadinta macluumaadka model iyo hall pachinko, macluumaad kala duwan. In
, laakiin aad u malaynayso in laga yaabo in ay ama la mid ma aha sida P-WORLD, sida magaca goobta Lobo xogta Todoba, in this site, xogta gaarka ah iyo pachinko mashiinka mid ka mid ah tii pachinko in ay ka diiwaan gashan lagu daydo ah xogta ayaa u yimid in la arko, waxa uu noqday ugu badnaan muuqaalada.
xogta arkay, tirada Ghanna jeer, bilaabi xawaaraha wareeg ah, waxa loo arki karaa ilaa tirada heshay ah. Iyadoo sii joogo guriga, si la mid ah sida in ay eegaan xogta Robo in tii pachinko ah, sidoo kale waxa uu noqday suurtagal ah in maalinta ku xigta ee madal si ay u doortaan.
markii si ay u ururiyaan xogta ka mid ah maalinta caadiga ah, aado dukaan pachinko xiran wax yar ka hor, waxaan u malaynayaa in ay jiraan siyaabo badan oo iman in la ogaado hal mid ka mid ah xogta.
Laakiin waa in aan in aan qowladda pachinko tagaan maalin kasta, si ay shaqada waxaa sidoo kale looga baahan yahay, mar note qaldan, hana dukaanka tagaan maalinta ku xigta, sidoo kale xaqiiqada ah in xogta saxda ah ma oga, hufnaan Waxa aanu odhan maayo, oo si gaar ah.
Sidaa darteed, wax ku ool ah in la isticmaalo goobta Robo xogta this Todoba, iyo waxa suurto gal ah in ay si fudud wadar ahaan mid ka mid ah xogta qowladda pachinko kasta.
First, loo abuuro miiska xogta ah ee guriga of computer shakhsi. Waxaa, goobta Robo xogta Todoba, waxaad laga yaabaa in haddii aan nuqul ka iyo Jinka helay xogta miiska. Data in la soo guuriyeen waa tiro kubad xoog buuxa iyo tirada guud ee Kacdoonkii.
in this, waxa uu noqonayaa mid suurtogal ah si loo ogaado meesha haysa mid ka mid ah mashiinka hal kala dillaaciyey ah. Haddii aad caanaha ah, kala mashiinka labada makiinada iyo guud ahaan boqolkiiba hal maalin maalinta ka, waxa aad u haboon, sababtoo ah waxaa loo xisaabin karaa.
By xisaabinta kala mishiinka, awoodo inay haleelaan maalinta iyo guud ahaan miiska gaarka ah ee xaaladda aad u noqon doonaa. asalka ah aan lagu arkin keliya in tii pachinko Day Tan iyo markii ay aragtay xogta guriga, iyo sidoo kale go'aan ka gaari karaan madal of Ujeedada maalintii hore, marka si dhab ah u tag qowladda pachinko ah, waxaad awoodi doontaa in aad xooga saartid jeegga of dhidibkii noqon doonaa.
xog ururinta, sababtoo ah waa waqti lumis iyo dadaal, aad leedahay waxaa muhiim ah in midkood sida sahlan shaqada saxda ah. site Robo Data Toddoba waa site a in la helaa helitaanka xogta adag on goobaha kale.
Si kastaba ha ahaatee, waa ay awoodaan in ay arkaan macluumaadka, waxay noqon doontaa oo kaliya in tii pachinko in ay ka diiwaan gashan, tii pachinko in aad u socotid noqon wax aan micno ah ma sameyneyso hadii aadan iska diiwaan galin doonaa. Markaas, si aad u aragto faraqa u dhexeeya P-WORLD, si aan u soo jeestay in ay bixiyaan, waxaan u malaynayaa in ay tahay meesha la yidhaahdo ama loo tixgeliyaa sida biilka macluumaad ah.
qeyb ka mid ah akhriska ruxruxo ahaan xogta, sidaas darteed waxaan ahaayeen dhab in isla qowladda pachinko ah, Xulasho aan shaki ku jirin. waxay noqon kartaa mid si fudud oo aan isticmaalka waqtiga, sababtoo ah waa habka isticmaalka xogta ah, isku day.